IYADA OO DAREENKA BEERALAYDA: TAYADA SARE LEH, FAA'IIDOOYINKA CULUS - XOOLAHA
Khasaaro caan ah Rizen
Khudaarta Rizen ee jilicsan waa farcanka Flanders, kuwaas, oo ka dhalatay guusha guuleysiga, waxay heshay muuqaal cajiib ah casriga ah. Caanaha waxaa laga soo saaray Germany. Ka tarjumay Jarmalka Jarmalka macnihiisu waa mid aad u weyn, oo aad u weyn. Tani waa run. Baaxadiisu waxay ku raaxeeysataa xitaa beeralayda caanka ah.
Kuwani waa xayawaan aad u fiican, deggan oo aad u caqli badan. Khamriga caleenta qulqulaya waa: cawl, cadaan, boorofiyanka Beljamka, bakeyle Vienna, bakeylka weyn ee Jarmalka.
Mucjisada caddaanka ah waxay ahayd natiijada ka soo gudubka oo leh shinchilla. Waxa uu leeyahay dhogor aad u fiican iyo hilib casri ah oo casiir leh.
Xayawaanka cawliga ah ee roodhiga ah ee Russia. Waxay magaceeda u heshay midabka midabkeeda. Miisaankiisu waa mid aad u weyn (5 - 7 kg).
Bakeyga weyn ee Belgian waa matxafka of bakaylaha ee size size Rizen weyn. Cuntada aadka u macaan.
Bakayle Wena wuxuu leeyahay midab madow ama madow. The ugu yar yar ee Risen (3 - 5 kg) iyo ugu awoodda badan. Lagu qiimeeyo hilibka tayada sare leh.
Bakteeriga wayn ee Jarmalka Risen - sababtoo ah xulasho taxaddar leh, ayaa hadda gaaray 12 kg miisaanka.
Daawooyinka bakaylaha waa kuwa ugu weyn adduunka. Miisaanka celceliska waa 6-10 kg, iyo nuqullo ka mid ah - ilaa 14 kg. Jidhku waa mid weyn, murqo. Dhererka 70 cm Qolalka dheer, daboolay dhogorta, fareeshka (17-20 cm).
Khamiis Risen waxa loola jeedaa hilibka iyo xayawaanka xoolaha. Dharka ayaa ah mid madow, gaaban. Uma baahna daryeel gaar ah. Midabka waa mugdi madow, hurdi-cawl, ciid, agouti, madow, buluug.
Waxyaabaha qashinka ah ee bakeylka weyn ee leh dufanka wanaagsan waa 60-61%. Maqaarka maqaarka waa 2,500-2,700 centimitir laba jibbaaran, oo leh tijaabooyin waaweyn ilaa 3,000 oo mitir laba jibbaaran.
Wanaagsanaanta BreedSiciradu waa:
Hilib fudud, casiir leh oo hilib leh;
Tijaabooyin badan oo tayo sarre leh leh dhogor iyo dhogag leh.
Faa'iidooyinka caanaha waxaa ka mid ah:
Baqashada dambe ee bakaylaha;
Qaadashada raashin sare;
Goobaha waaweyn ee taranta.
Sababtoo ah cabbirka weyn ee bakaylaha, Risen waxaa lagu rusheeyaa aviaries. Guriga maaha kuwo qiimo leh. Gaar ahaan haddii carruurta yaryari ay halkaas ku nool yihiin. Bakayle ah oo kaliya ayaa laga yaabaa in ay si fudud ugu riixaan. Dhoobada waxaa lagu daboolayaa fiilo dabiici ah (caws, balka cagaarka). Waa inay jirtaa nadiifin joogta ah, had iyo jeer biyaha cusub nadiif u ah cabitaanka cabitaanka.
Sababtoo ah cabbirka weyn ee timaha ee bakaylaha waxay u baahan tahay daryeel taxadar leh. Beeraleyda jilciya Rizens ee xirmada waa in ay leeyihiin buraash ah isku darka xayawaanka, maqaarka si loo gooyo cirridka.
Khamiisyada si fudud u dulqaadanayo dhaxan, si aan caadi ahayn ha u xanuunsan, leedahay difaac adag.
Talaalka ka hortagga waxaa la sameeyaa horraanta gu'ga. Xayawaanka yaryar waxaa la tallaalaa da'da 1.5 bilood. Khashiirada waa la tallaali karaa marxalad kasta oo uur ah.
Sababtoo ah wax aan faa'iido u lahayn caanaha (koritaan la'aanta iyo koritaanka gaaban ee bakaylaha), bakaylaha ayaa si lama filaan ah loogu iibiyo iibka. Beeraleydu iyaga ayaa naftooda u kora.
Wixii tarbiyeyaashu waxay qaadaan bakaylaha yaryar 10 bilood. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto shakhsiyaadka la soo xulay ee ka soo jeeda meelo kala duwan
Cilad aan la qabin ee cuntada, laakiin waxay cunaan wax badan.
Xilliga xagaaga waxaa ka mid ah cawska, laanta, xididdada, khudaarta, miraha, hadhuudhka, quudinta.
Xilliga jiilaalka, Rizena waxaa lagu quudin jiray xayawaan, xayawaan, iyo sidoo kale waxay diyaariyaan mashiin qoyan oo ka sameysan khudaarta, miraha, hilibka iyo cuntada lafaha, fiitamiinada, iyo macdanta macdanta. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ku dar daroogooyinka cuntada.
Khudaar of this caleemaha yihiin kuwo aad u ballaadhan. Hal qiyaastii ayaa keena 10-12 bakaylaha.
Si taxadar leh u ilaali carruurta. Si dhif ah ayay u diidaan dhir.
Inta lagu jiro nuugista iyo quudinta waxay u baahan tahay nafaqo kordhay, biyo badan.
h2] Daryeelka Ilmaha
Iyo sidoo kale noocyada kale ee bakaylaha, aroortii ka soo horjeeda, Rizen waxay ka dhigeysaa buulooga carruurtooda mustaqbalka hoos iyo caws. Ku quudiya dhallaanka hal mar maalintii.
Qolalka meesha ilmuhu ku yaal waa inay had iyo jeer nadiif ahaadaan. Haddii aaney lagama maarmaan ahayn, hooyooyinka haysta ilmaha waa in aan la dhibin.
Khamriga, oo ka duwan noocyada naasaha kale, waxay bilaabaan inay si madax banaan u quudiyaan da'da qiyaas ahaan hal bil. Si tartiib ah u kora, adoo isticmaalaya qadar badan oo quudin ah. Sababtan awgeed, waxaa loogu yeeraa goor dambe-Bisaylkiisa.
Carruurta dhawaan dhashay waxay inta badan u dhintaan xanaaqa. Si looga hortago tan, waxay ku daraan cuntada biomitsin. Waxay isku dhafan tahay cusbo iyo hilib iyo cunto lafo ayaa la siiyaa cirrid. Hilibka iyo lafaha cuntadu wuxuu kobciyaa jidhka bakaylaha leh calcium, taas oo lagama maarmaan u ah koritaanka lafaha iyo murqaha.
Bilaha ugu horreeya ee noloshooda, xajmiga qaansarradu maaha mid ka yaryar cabbirka weyn ee bakaylaha dadka waawayn. Sidaa darteed, shakhsiyaadka 3-bilood jirka ah ayaa horeyba loo diley. Waxay noqdaan kuwo jinsi ahaan ah 3 ilaa 4 bilood. Laakiin waxay ku haboon yihiin taranta kaliya ee 8-10 bilood.
Waqtigan xaadirka ah, tarbiyeyaasha ayaa si firfircoon u shaqeynaya si ay u horumariyaan taranka. Gaar ahaan - ka badan dardargelinta koritaanka dhalinyarada.